ကမ္ဘာ့ အသက်အငယ်ဆုံး စံချိန်ရှင်များ – AnZarTone
ကမ္ဘာ့ အသက်အငယ်ဆုံး စံချိန်ရှင်များ
Fifca Stanescu ဆိုတဲ့ ရိုမေးနီးယား အမျိုးသမီးဟာ သူမရဲ့အသက် (၁၂) နှစ် အရွယ်မှာ Maria လို့ခေါ်တဲ့ သမီး တစ်ယောက်ကို မွေးဖွားပေးခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ သမီး Maria က အမေဖြစ်သူရဲ့ စံချိန်ကို ထပ်ချိုးတဲ့ အနေနဲ့ အသက် (၁၁) နှစ် အရွယ်မှာပဲIon လို့ခေါ်တဲ့ သားတစ်ယောက်ကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် Ion ဟာ အသက် ၂ နှစ်အရွယ်ကို ရောက်နေပြီ ဖြစ်သလို သူ့ရဲ့ အဘွား ဖြစ်သူက Fifca Stanescu ဟာလည်း အသက် (၂၅) နှစ် အရွယ်ကို ရောက်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် အသက် (၂၅) နှစ်နဲ့ အဘွား အဖြစ်ကို ရောက်ခဲ့သူ Fifca Stanescu ကို ကမ္ဘာ့ အသက် အငယ်ဆုံး အဘွား (World’s youngest grandmother) အဖြစ် သတ်မှတ် ထားကြပါတယ်။
ယောဂကျင့်စဉ်ကို ကြားဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ အိန္ဒိယပြည်မှာ ခေတ်စားတဲ့ ကျန်းမာရေး ကျင့်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Shruti Pandey လို့ အမည်ရတဲ့ အသက် (၆) နှစ်အရွယ် ကလေးမလေး တစ်ယောက်ကို လက်ညိုးညွှန်ပြီး အဲဒါ ယောဂ ဆရာမ ပဲ ဆိုရင် ယုံကြမလား မသိဘူး။ တကယ်ပါ။ အသက် ၆ နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ Shruti Pandy ဟာ အိန္ဒိယပြည်မှာ ယောဂ ကျင့်စဉ်တွေကို သင်ကြားပေးတဲ့ ဆရာမ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ သင်တန်းကို မနက်ခင်းတိုင်း ၅း၃၀ အချိန်မှာ စတင်လေ့ရှိပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ဆရာ/ဆရာမတွေ၊ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးတွေ တက်ရောက်ကြပါတယ်။ အသက် ၆ နှစ် အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ သူမကို ကမ္ဘာ့ အသက်အငယ်ဆုံး ယောဂဆရာ (World’s Youngest Yoga Teacher) အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Australia နိုင်ငံ Brisbane ရဲ့အပြင်ဘက် ရေလှိုင်းတွေကြားမှာ အသက် (၂) နှစ်အရွယ် ကလေးငယ် တစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရရင် သူငယ်ချင်းတို့ စိုးရိမ်သွားကြမလား။ သူတို့ နိုင်ငံက လူတွေ အတွက်တော့ ဒါဟာ စိုးရိမ်စရာ မလိုအပ်တော့သလို၊ အံ့သြစရာလည်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။ Jaylan Amor လို့ခေါ်တဲ့ အသက် (၂) နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်ဟာ ပင်လယ်ပြင် လှိုင်းလူးတွေကြားမှာ အခုဆို ပျော်မြူးလို့ နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် သူ့ကို ကမ္ဘာ့ အသက်အငယ်ဆုံး ရေလွှာ လျှောစီးသူ (World’s Youngest Surfer) အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။
၄။ Tattoo ပညာရှင်
ကစားရတဲ့အရွယ်မှာ ကစားခြင်းကို မနှစ်သက်ဘဲ tattoo ပညာတွေကို လေ့လာနေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကို ညွှန်းရမယ်ဆိုရင် Ruby Dickinson ကိုပဲ ညွှန်ပြရပါလိမ့်မယ်။ အခု သူမရဲ့ အသက်ဟာ လေးနှစ်အရွယ်ပဲ ရှိပါတယ်။ သူမဟာ သူမ ဖခင်ရဲ့ Tattoo ဆိုင်မှာ ကလေးကစားစရာ အရုပ်လေးတွေကို Tattoo ထိုးပေးရင်း သူမရဲ့ tattoo သင်ခန်းစာတွေကို လေ့ကျင့်နေခဲ့ပါတယ်။ သူမကို ကမ္ဘာ့ အသက်အငယ်ဆုံး တက်တူး ပညာရှင် (World’s Youngest Tattoo Artist) လို့ပြောရင် မှားမယ် မထင်ပါဘူး။
၅။ IT ပညာရှင်
‘အရွယ်ရောက်တဲ့အခါ Computer Operating System အသစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးချင်တယ်’ ဆိုတဲ့ Macedonia သားလေး Marko Calasan ဟာ အသက် (၈) နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးပေမယ့် Microsoft ရဲ့ IT professional ကို အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ Macedonia ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူ Nikola Gruevski ကလည်း သူ့ကို ကွန်ပျူတာ (၁၅) လုံးပါတဲ့ IT Lab တစ်ခုကိုလည်း လက်ဆောင် ပေးထားပါသေးတယ်။ အသက် (၂) နှစ် အရွယ်မှာပဲ စာကို ရေးတတ်၊ ဖတ်တတ်ခဲ့ပြီး အဲဒီ အရွယ်မှာပဲ ကွန်ပျူတာပညာကို စတင် လေ့လာခဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကို ကမ္ဘာ့ အသက်အငယ်ဆုံး IT ပညာရှင် (World’s Youngest IT Whiz) လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
This entry was posted in Blog and tagged world. Bookmark the permalink.
← Blog ရေးသားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
Free Domain Names ရယူနိုင်သည့် ဆိုက်အချို့ →